Ku Dhawaad 40 Qof oo ku Dhaawacantay Gaari la Jiirsiiyay Dad dhiganayay Xaflad Christmas-ka ah
HomeWararka CaalamkaKu Dhawaad 40 Qof oo ku Dhaawacantay Gaari la Jiirsiiyay Dad dhiganayay Xaflad Christmas-ka ah
November 23, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay, in ka badan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen ka dib markii baabuur uu jiiray dad ka qeybgalayay xaflad Christmas-ka oo ka dhacday Waukesha, Wisconsin kana tirsan Mareykanka. Hal qof ayaa loo xidhay, sida ay booliisku sheegeen.
Booliiska ayaa goor hore ku dhawaaqay inay jiraan dhowr qof oo dhintay. Maamulka xaafadda Milwaukee ayaa sheegay in in ka badan 40 qof ay ku dhaawacmeen.
Ilaa hadda ma jiraan wax war ah oo ka soo baxaya sababta ka danbeysa qofka gaadhiga marsiiyay goobta uu ka socda dhoolatuska.
Dhacdadan ayaa laga soo duubay muuqaal si toos ah looga daawanayay dowladda hoose, waxaana la arkayay dad badan oo qeylinayay.